सट्टेबाजी रणनीति | एक्सप्रेस खेल & क्यासिनो सट्टेबाजी | द्रुत & कुशल पहुँच
सट्टेबाजी रणनीति – Keep What you Win with Sports.expresscasino.co.uk
कसरी अक्सर तपाईं शब्द 'फाइदा खेलाडी' राम्रो धारण लाग्छ? खेल को दुनिया मा अक्सर छैन सट्टेबाजी, म भन्छु.
हामी धेरै धारणा हो सबैलाई जो कि लामो तिनीहरूले बारम्बार र लामो पर्याप्त प्ले रूपमा दिन को अन्त मा एक खेल लाभ मा बाजी.
यो आवश्यक साँचो छैन.
हामी सबै bookmakers सधैं खेलाडी भन्दा किनारा भनेर थाहा, र कार्ड खेल्दै मा प्रमुख पकड. भने मात्र त्यहाँ किनारा बाहिर पनि एउटा तरिका थियो, निष्पक्ष र वर्ग खेल्न; केवल खेलाडी पनि बेला हरेक पटक एक फाइदा थियो भने.
राम्रो, चाखलाग्दो कुरा पर्याप्त; त्यहाँ एक तरिका हो! एउटा राम्रो र राम्रो योजना सट्टेबाजी रणनीति तपाईं किनारा दिन सक्छ.
यहाँ उन्नत सट्टेबाजी रणनीति को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू मध्ये एक मा एक नजर छ. म मूल कुराहरू वरिपरि आफ्नो बाटो अनुमान छु तपाईंलाई थाहा, उन्नत पैसा घुमिरहेको लागि सट्टेबाजी रणनीति आफ्नो मूल कुराहरु सही छ व्यापार बप्तिस्मा गरिएको छ खेलाडीहरूको लागि हो र.
यस्तो अपेक्षा मूल्य रूपमा बुझ्नका अवधारणाहरु (EV)
अपेक्षित मूल्य (EV) को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीति मध्ये एक छ सट्टेबाजी व्यापार. यसलाई यो एक प्रायः प्रयोग योजना रहिरहन्छ भन्ने कुनै आश्चर्य त्यसैले छ सट्टेबाजी दृश्य.
गरेको coherently यो थप बुझ्न एउटा उदाहरण विचार गरौं.
तपाईँलाई भन्न गरौं र मलाई basketing बलमा एक मिलान गर्न निर्णय- राम्रो, म शाब्दिक अर्थ! हरेक बल भनेर टोकरी लागि, म सहमत छु भुक्तानी $1. त्यस्तै, हरेक बल लागि भनेर म टोकरी मलाई तिर्न $1.
सट्टेबाजी रणनीति ब्लग हुनेछ तलको बोनस तालिका पछि जारी
अब, हामी सदाको कस्तो देखिन्छ सक्छ र अझै पनि कुनै विजेता छ लागि basketballs गर्न सक्छन्. औसत को व्यवस्था माथि र हरेक लागि परिहाल्छ किनभने यो छ $1 म लगभग तुरुन्त यसलाई गुमाउने अन्त बनाउन. यो शर्त अन्त परिणाम या त तरिकामा झूल एक बराबर मौका हुन सक्छ जो तटस्थ मूल्य छ मानिन्छ
अब यसलाई एउटा फरक आयाम थप्न; तपाईँलाई बलमा basketing को थकित प्राप्त भन्न र खेल अन्त्य गर्न छनौट गरौं. अब, अर्कोतर्फ म एक तिर inching छु भन्ने महसुस जीत र गन्ध विजय. म तरिका तपाईं एक अतिरिक्त भुक्तानी गर्न सहमत द्वारा रहन र अब को लागि तपाईँलाई खेल्न विश्वस्त गर्न व्यवस्थापन 50 हरेक बल तपाईं टोकरी लागि सेन्ट. तपाईं तथापि, लीन आफ्नो सट्टेबाजी रणनीति र जारी मलाई तिर्न $1 पहिले सहमत रूपमा.
त्यहाँ नहुनु अचानक पारी कसरी नोटिस. तपाईं बनाउन सक्छ कि हरेक मौका छ $1.50 र केवल गुमाउनु $1.00 बदलामा. त्यसैले तपाईंले लाभ उठाउन 50 हरेक को लागि सेन्ट 1 तपाईं सफल प्रयास. यो सकारात्मक आशाले सिर्जना (+EV) को 50 सेन्ट. तथापि, मलाई यो रकम भुक्तान रूपमा, म नकारात्मक आषा मूल्य पीडित अन्त (-EV) को 50 सेन्ट. लागि सफल सट्टेबाजी, ध्यान कमाउन र + EV बाजी प्राप्त र -EV हराउछ जोगिन हुनुपर्छ.
Sports.expresscasino.co.uk लागि रणनीति ब्लग सट्टेबाजी. तपाईं के जीत राख्न!